Helitaanka Microsoft-LinkedIn Furitaanka Albaabada Cusub ee Dadka
Microsoft LinkedIn Qaadashada Laga Furay Albaabada Cusub ee Dadka
Isku xidhka Microsoft ee LinkedIn waxaa lagu sifeeyaa kantaroolayaasha, furitaan cusub oo loogu talagalay shakhsiyaadka caalamka
Waxay ahayd qiyaastii lix bilood ka hor, bishii June 13, in ay ku dhawaaqeen in Microsoft uu helo LinkedIn. Dhanka kale, waxay sheegeen in ay qorsheynayeen in ay dejiyaan wada xaajoodka ka hor sanadka dhamaadkiisa. Maanta, Komishanka Yurub ayaa ku dhawaaqay in ay xaqiijisay xaqiijinta. Sidaa daraadeed, waxay hadda heleen inta ugu badan ee la isku halleyn karo maamulka ee la filayo in ay dhammaystiraan helitaanka, iyo qorshaha ayaa xirnaan doona maalmaha soo socda.
Kaalinta Bruxelliga waxay qaadataa xisaabinta isbarbardhigga iyo kaabayaasha Maraykanka, Koonfur Afrika, Kanada, Brazil iyo Koonfur Afrika. Qaran kasta iyo kuwo kaleba, waxay fursad u heleen inay isku darsadaan isku dhafka ay la leeyihiin xukuumadaha dawladda iyo kontoroolayaasha si faahfaahsan.
Iyadoo qayb ka ah imtixaanadooda ay la socdaan Guddiga Yurub, waxay u xilsaareen waajibaadyo yar oo ku saabsan taageerada Microsoft ee khabiirada ajaanibta ah ee muddo dheer kala duwan. Tusaale ahaan, waxay shaaciyeen in shanta sano ee soo socda:
Waxay sii wadi doonaan inay ka dhigaan barnaamijkooda barnaamijka ku-meel-gaadhka ah ee la heli karo oo ay heli karaan maamullada dhex-dhexaadinta dadka ee khibrad u leh. Barnaamijka "Office Add-in" wuxuu awood u siinayaa naqshadeeyayaasha inay isku duweeyaan maamulladooda Microsoft Muuqaalka, Word, PowerPoint iyo Excel, oo siinaya macaamiisha si loo hagaajiyo adeegsiga Xafiiska. Maadaama ay sii wadaan wanaajinta barnaamijkan, dib-u-kicintaas waxay noqon doonaan kuwo la gaari karo maamullada isdhexgalka dadka ee khibradda u leh.
Waxay sii wadayaan inay sameystaan ​​waqti xaddidan wakhtiyada xayeysiiska ah ee Xafiiska Diiwaanka oo loo heli karo khabiiro khibrad shisheeye oo muddo dheer ah.
Waxay damaanad qaadi doonaan in maamulayaasha IT-da iyo macaamiishu ay isku deyi karaan inay kulmaan xafiiskooda iyagoo ka soo qaadaya inay muujinayaan in UI muujineyso astaanta LinkedIn iyo ficilada ficil ee laga yaabo in la isku duwo.
Dhanka khadka ah ee ay ku dhistaan ​​codsiga LinkedIn ama foormo loogu talagalay Windows PC-yada iyo ku darista Windows, waxay u oggolaanayaan soo saarayaasha kombuyuutarrada in ay ka dhigaan inayan ku soo bandhigin kombiyuutarka Windows ee Aagga Dhaqaalaha Yurub, ama EEA. Sidoo kale, waxay damaanad qaadi doonaan in macaamiishu ay iska saari karaan codsiga iyo fayoobka fursadda ay u rabaan. Waxay sidoo kale ma isticmaali doonaan Windows lafteeda inay macaamiishu kiciyaan inay soo bandhigaan codsiga LinkedIn, inkastoo xaqiiqda ah inay ku sii jiri karto dukaanka Windows oo ay siyaabo kala duwan u horumariso.
Heshiiska Microsoft LinkedIn
EEA-da ma geli doonaan isku-duubnaanta kombuyuutarrada loogu talagalay inay horey u dhistaan ​​codsi Windows LinkedIn ama fayleed oo taageeri lahaa LinkedIn dhismaha cirqiga iyo qadadahaan oo ay ku jiraan kala-soocidda kala-guursiga qof aqoon fiican u leh maamulayaasha isgaarsiinta.
Waxay ku qiimeeyeen fursadda ay uga hadlaan kuwan iyo waxyaabo kale oo khafiif ah oo ku saabsan wadada maskaxeed iyo wax soo saar leh oo leh Guddiga Yurub.
Iyadoo nidaamkan maamulkeena ee naga danbeeya, waxay isku midoobi karaan laba urur oo cajiib ah oo ay xoogga saaraan arrimo ballaaran oo ballaadhan oo ku saabsan waxa iman doona. Dhacdooyinka lixdii bilood ee hore ma aha oo kaliya fursadan ganacsi, laakiin halkii arrimaha bulshada ee aad u ballaadhan oo la xidhiidha iyaga ayaa ka muhiimsan.
Bishii Juun, Satya Nadella iyo Jeff Weiner, madaxda shirkadaha Microsoft iyo LinkedIn, waxay soo sheegeen aragtideeda ay wadajir u leeyihiin inay midoobaan dariiqa aqoonta adduunka ee darawalnimada ku leh nidaamka wadista aqooneed ee caalamka. Kaliya toban cisho kaddib markii ay ku dhawaaqeen isku dhafka, codbixiyayaasha Boqortooyada Ingiriiska ayaa u codeeyay inay ka baxaan Midowga Yurub. Wax intaa ka badan, shan bilood ka dib, tartanka tartanka madaxweynenimo ee tartanka madaxweynenimo ee Maraykanka ayaa helay gabagabo. Labada dhinac ee Atlantic, waxay u muuqatay in ay si cad u muujineyso in dad badan ay bartaan bidixda oo aan awoodin inay ka qaybgalaan horumarinta dhaqaalaha iyo furitaanka dhaqaalaha kobcaya ee kumbuyuutarka.
Inkasta oo qalabyada hal-abuurka ahi aysan ahayn argagax ay ugu jiraan dhibaatooyinka maaliyadeed ee hadda jira, waxay ku kalsoon yihiin inay samayn karaan ballan qaad qasab ah. Microsoft iyo LinkedIn wadaagaan fursad weyn oo ay u leeyihiin shakhsiyaadka internetka ah si ay u abuuraan oo u helaan aqoonta ay u leeyihiin kobcinta cusub, aqoonsadaan oo raadsadaan shaqooyinka cusub, iyo inay noqdaan kuwo cusub oo faa'iido leh isla markaana ay la shaqeeyaan asxaabtooda. Wadashaqayntu waxay samayn karaan wax badan si ay ugu adeegaan kuwa leh tacliin heer sare ah, iyo sidoo kale shakhsiyaadka badan ee raadinaya wada-hadal cusub, dabeecado iyo aqoon-is-weydaarsi loo qoondeeyey diyaarinta xirfadle ah oo loogu yeero karti-xirfadeedka. Hadafkoodu waa in ay ka qaybqaataan si ay albaab furfuran u sameeyaan shakhsiyaadka aan ka qaybqaadan horumarinta lacagaha dambe.
Iyadoo laysku darayo Microsoft iyo LinkedIn, waxay ku heli karaan hab ay dadka shakhsiyaadka u bartaan oo ay ka mid yihiin waxqabad iyo raadinta shaqooyin ka fiican. Iyada oo la adeegsanayo Microsoft Philanthropies, waxay gacan ka geysan doonaan wax ka badan urur kasta oo kale si ay u gaarsiiyaan iskuuladii hore ee iskuulada. Iyadoo loo marayo dhaqdhaqaaqa Helitaanka La Wadaagsiiyo iyo farsamooyinka cusub ee fogfog "telifoonnada" White Spaces ", waxa ay u gudbin doonaan adeegyo ballaadhan oo ballaadhan oo kooxo rus ah. Waxyaabaha intaa ka sii badan, Shirkadda Isgaadhsiinta LinkedIn, iyada oo macluumaadkeeda ku saabsan baahiyaha korriinka iyo kartida baahida, waxaa jira fursado dheeraad ah oo lagu caawiyo dawladaha isticmaalaya macluumaad wanaagsan iyo kartida macquulka ah si ay u raadsadaan nidaamyada horumarinta dhaqaalaha si ay ula shaqeeyaan shakhsiyaadka leh albaab cusub oo furan.
Waxay si dhakhso ah u arkaan in aysan jirin hal urur oo ka gedisan kara fahamka dhibaatooyinka maaliyadeed ee badan oo maanta taagan. Waxaa laga yaabaa in ka badan wax kasta oo kale, dawladuhu waa inay ku sii wadaan sidii ay u soo cusbooneysiin lahaayeen meelo badan oo waxbarasho, diyaarin iyo u shaqeynayaan. Sidoo kale, qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa furan, dhammaantood waa in ay la kulmaan oo ay ku dhaqmaan dareen wadaag ah.
Ma jirto wax shaqo la'aan ah - ama fursad - horteena.
Ka dib markii ay dhammeeyeen wadahadal ay la yeeshaan dawladaha caalamka ku saabsan fursadaha ay isku mideeysan yihiin Microsoft iyo LinkedIn, waxay doonayaan inay bilaabaan oo ay diiradda saaraan sidii ay u qabsan lahaayeen qaybtooda.